Nna Ha Ọ̀ Bụ Ebreham Ka Ọ̀ Bụ Ekwensu? | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
NDỊ JUU EKWUO NA EBREHAM BỤ NNA HA
TUPU A MỤỌ EBREHAM, JIZỌS ADỊRỊLA NDỤ
Jizọs ka nọ na Jeruselem na-akụziri ndị mmadụ eziokwu dị mkpa. Ọ bịara Jeruselem maka Ememme Ụlọikwuu (nke a na-akpọkwa Ememme Ụlọ Ndò). Ọ dịbeghị anya ụfọdụ ndị Juu, bụ́ ndị bịara ememme ahụ, gwara ya, sị: “Anyị bụ ụmụ Ebreham, anyị abụtụbeghị ohu.” Jizọs gwara ha, sị: “Amaara m na unu bụ ụmụ Ebreham; ma unu na-achọ igbu m, n’ihi na okwu m adịghị arụpụta ihe ọ bụla n’etiti unu. Ihe m hụrụ n’ebe Nna m nọ ka m na-ekwu; ya mere, na-emenụ ihe unu nụrụ n’ọnụ nna unu.”—Jọn 8:33, 37, 38.
Ihe Jizọs na-ekwu doro anya. Ihe ọ na-ekwu bụ na Nna ya dị iche ná nna ha. Ndị Juu aghọtaghị ihe okwu Jizọs pụtara. N’ihi ya, ha kwughachiri ihe ha kwuru. Ha sịrị ya: “Nna anyị bụ Ebreham.” (Jọn 8:39; Aịzaya 41:8) Nke bụ́ eziokwu bụ na ha si n’agbụrụ Ebreham. N’ihi ya, ha chere na ha na-efe Chineke ahụ Ebreham, bụ́ enyi Chineke, fere.
Ihe Jizọs gwara ha juru ha anya. Ọ sịrị ha: “Ọ bụrụ na unu bụ ụmụ Ebreham, na-arụnụ ọrụ Ebreham rụrụ.” N’eziokwu, nwa kwesịrị ịna-akpa àgwà ka nna ya. Jizọs gwakwara ha, sị: “Ma ugbu a, unu na-achọ igbu m, bụ́ onye gwara unu eziokwu nke m nụrụ n’ọnụ Chineke. Ebreham emeghị otú a.” Jizọs gwaziri ha ihe gbara ha gharịị. Ọ sịrị ha: “Unu na-arụ ọrụ nna unu.”—Jọn 8:39-41.
Ndị Juu amaghị onye Jizọs na-ekwu na ọ bụ nna ha. Ha kwuru na ha bụ ezigbo ụmụ Ebreham. Ha sịrị: “Anyị abụghị ndị a kwatara n’iko; anyị nwere otu Nna, ya bụ, Chineke.” Chineke ọ̀ bụnụ Nna ha? Jizọs gwara ha, sị: “Ọ bụrụ na Chineke bụ Nna unu, unu ga-ahụ m n’anya, n’ihi na esi m n’ebe Chineke nọ bịa, m wee nọrọ n’ebe a. Abịaghịkwa m n’uche nke aka m ma ọlị, kama ọ bụ Onye ahụ zitere m.” Jizọs jụrụ ha ajụjụ ma zaa ya n’onwe ya. Ọ jụrụ ha, sị: “Gịnị mere na unu amaghị ihe m na-ekwu? Ọ bụ n’ihi na unu apụghị ige ntị n’okwu m.”—Jọn 8:41-43.
Jizọs agbalịala ime ka ha mata ihe ga-eme ha ma ha jụ ya. Ọ gwaziri ha hoo haa, sị: “Unu sitere ná nna unu bụ́ Ekwensu, unu na-achọkwa ime ihe nna unu chọrọ.” Olee ụdị onye nna ha bụ? Jizọs kwuru, sị: “Onye ahụ bụ ogbu mmadụ mgbe ọ malitere, o guzosighịkwa ike n’eziokwu.” Jizọs kwukwara, sị: “Onye si na Chineke na-ege ntị n’okwu Chineke. Ọ bụ ya mere unu adịghị ege ntị, n’ihi na unu esiteghị na Chineke.”—Jọn 8:44, 47.
Ihe a Jizọs kwuru were ndị Juu ezigbo iwe, ha agwa ya, sị: “Ọ̀ kwa anyị kwuru ekwu na ị bụ onye Sameria nakwa na mmụọ ọjọọ ji gị?” Ha kpọrọ Jizọs “onye Sameria” iji gosi na ha kpọrọ ya asị. Jizọs leghaara mkparị a ha kparịrị ya anya ma gwa ha, sị: “Mmụọ ọjọọ ejighị m, kama m na-asọpụrụ Nna m, unu adịghịkwa asọpụrụ m.” Nkwa Jizọs kwere gosiri na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-edebe okwu m, ọ gaghị anwụ ma ọlị.” Jizọs anaghị ekwu na ndịozi ya na ndị ọzọ na-eso ụzọ ya agaghị anwụ ọnwụ nkịtị. Ihe ọ na-ekwu bụ na ha agaghị anwụ ọnwụ ebighị ebi, ya bụ, “ọnwụ nke abụọ.” Onye nwụrụ ọnwụ nke abụọ a enweghị olileanya na a ga-akpọlite ya n’ọnwụ.—Jọn 8:48-51; Mkpughe 21:8.
Ma, ndị Juu chere na Jizọs na-ekwu maka ọnwụ nkịtị. Ha sịrị ya: “Ugbu a ka anyị maara na i nwere mmụọ ọjọọ. Ebreham nwụrụ, ndị amụma nwụkwara; ma ị na-asị, ‘Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-edebe okwu m, ọ gaghị edetụ ọnwụ ire ma ọlị.’ Ị̀ ka nna anyị Ebreham, bụ́ onye nwụrụnụ? . . . Ònye ka ị na-asịdị na ị bụ?”—Jọn 8:52, 53.
O doro anya na ihe Jizọs na-ekwu bụ na ya bụ Mesaya ahụ, ma ọ gwaghị ha ya hoo haa. Ọ gwara ha, sị: “Ọ bụrụ na m na-enye onwe m otuto, otuto m abụghị ihe ọ bụla. Ọ bụ Nna m na-enye m otuto, bụ́ onye ahụ unu na-asị na ọ bụ Chineke unu; ma unu amabeghị ya. Ma amaara m ya. Ọ bụrụkwa na mụ asị na amaghị m ya, m ga-adị ka unu, wee bụrụ onye ụgha.”—Jọn 8:54, 55.
Jizọs kwuziri banyere Ebreham nna nna ha, sị: “Ebreham nna unu ji ọṅụ dị ukwuu tụọ anya ịhụ ụbọchị m, ọ hụkwara ya wee ṅụrịa ọṅụ.” N’eziokwu, Ebreham kweere na nkwa Chineke ga-emezu ma na-atụ anya ọbịbịa Mesaya. Ndị Juu ekwetaghị n’ihe a Jizọs kwuru. N’ihi ya, ha jụrụ ya, sị: “Ị̀ na-ekwu na ị hụwo Ebreham mgbe ị na-erubeghị afọ iri ise?” Jizọs zara ha, sị: “N’ezie, n’ezie, ana m asị unu, tupu a mụọ Ebreham, mụ onwe m adịrịla ndụ.” Jizọs kwuru ihe a n’ihi na ọ bụbu mmụọ n’eluigwe tupu ya abịa n’ụwa.—Jọn 8:56-58.
Ihe a Jizọs kwuru, nke bụ́ na ya adịrịla ndụ tupu Ebreham, were ndị Juu iwe, ha achọọ ịtụ ya nkume. Ma, Jizọs pụrụ n’ụlọ nsọ ahụ n’enweghị ihe mere ya.
Olee otú Jizọs si mee ka a mata na Nna ya dị iche ná nna ndị iro ya?
Gịnị mere na ndị Juu ekwesịghị isi ọnwụ na Ebreham bụ nna ha?
Gịnị ka Jizọs bu n’obi kwuo na ndị na-eso ụzọ ya ‘agaghị anwụ ma ọlị’?
Nna Ha Ọ̀ Bụ Ebreham Ka Ọ̀ Bụ Ekwensu?
mailto:?body=Nna Ha Ọ̀ Bụ Ebreham Ka Ọ̀ Bụ Ekwensu?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014799%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nna Ha Ọ̀ Bụ Ebreham Ka Ọ̀ Bụ Ekwensu?